Filaharam-be raha ny hita teny amin’ireo Boriborintany teto an-drenivohitra tamin’ny fakana io kopia fahaterahana io. Ankoatra ireo mpiadina bakalôrea mantsy dia isany mila an’io taratasin’ny soram-piankohonana io ihany koa ireo ray aman-dreny hampiditra ny zanany hianatra amin’izao taom-pianarana vaovao 2020-2021 izao.
Hotanterahina ny 19 ka hatramin’ny 23 oktobra 2020 ny fanadinana bakalôrea 2020. Hitohy ny herinandro aorian’io ho an’ny mpiadina sokajy teknika sy teknôlôjika.
Miisa 164 341 ireo mpiadina voasoratra anarana hiatrika ny bakalôrea 2020, ho an’ny sokajy ankapobeny sy teknika mitambatra, raha toa ka 174 750 izany tamin’ny taon-dasa.
Ny Faritany Antananarivo no be mpiadina indrindra voasoratra anarana. Manodidina ny 71 000 izy ireo, mitsinjara ho 65 100 ho an’ny ny sokajy ankapobeny, ary 5 900 nisafidy ny sokajy teknika sy tekôlôjika. Ny Faritany Antsiranana kosa no vitsy mpiadina indrindra : 13 378.